युवतीले गरिन् बाँदरसँग अनैतिक कार्य (भिडियो हेर्नुहोस्) – Namaste Host
April 15, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on युवतीले गरिन् बाँदरसँग अनैतिक कार्य (भिडियो हेर्नुहोस्)
अफ्रिकी मुलुक इजिप्टमा एक युवतीलाई बाँदरमाथि अनैतिक कार्य गरेको आरोपमा जेल सजाय सुनाइएको छ । इजिप्टको मनसोरा शहरकी २५ वर्षीया ती युवतीलाई अदालतले तीन वर्षको जेल सजाय सुनाएको हो ।
अदालतले बासमा अहमद नाम गरेकी ती युवतीलाई बाँदरमाथि त्यस्तो गरेको आरोपमा जेल सजाय सुनाएको हो । उनी २०१८ अक्टोबरमा नै पक्राउ परेकी थिइन् । उनले बाँदरमाथि त्यस्तो गर्दै गरेको भिडियो इन्टरनेटमा पनि भाइरल भएको अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले उल्लेख गरेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएअनुसार ती युवतीले बाँदरसँग सार्वजनिक स्थलमा त्यस्तो कार्य गरेकी थिइन् । उनले बाँदरको यौ ना ङ चलाउँदै बाँदरलाई नराम्रो ब्यवहार गरेको अदालतले ठहर गरेको छ । सांकेतिक तस्वीर
तेस्तै , बाँदर–बाँदरर्नीले जुम्रा हेरेको देख्दा तपाईँ आपूलाई कसरी तुलना गर्नुहुन्छ ? हरेक प्राणीले अवस्थाका आधारमा आफ्ना सन्ततिलाई प्रेम गर्छ, चाट्छ, आपू ले नखाएरै भए पनि सन्तानलाई खुवाउँछ । मान्छेले जसरी चराहरू पनि पानीमा नुहाएर रमाइरहेका हुन्छन् ।
आपसमा झगडा पनि गर्छन्, मिल्छन् पनि । तिनले निर्धोलाई हेप्ने हुनाले पशु भनिएको हो तर मानिसलाई अलिकति चेतना उच्च भएकाले सभ्य पशु भनिएको हो । मान्छे पनि पशुकै दर्जाको अलिकति चेतनामा सबल मात्रै हो । नत्र सम्भोगका क्षणमा, क्रोधमा, ईष्र्यामा, लोभमा मानिस र पशुमा ठूलो अन्तर हुँदैन ।
मान्छेसँगै लुक्ने र लुकाउने व्यवहारको कोसिसमा मान्छे मात्रऔपचारिक बनेको हो । प्रकृतिमा स्वच्छन्द विचरण गर्नु हरेक जीवको आवश्यकता र नैसर्गिक अधिकार हो । बरु मान्छे भूकम्पले थिचिएला तिनले प्रकृतिसँग नातो गाँसेका हुन्छन् । भलै न्यायको आवाज ओकल्ने शक्ति तिनमा छैन तर भावना र संवेग हुन्छ ।
स–साना जीवदेखि विशाल जीवले यो प्रकृतिमा नै बाँच्न चाहन्छन् त्यो तिनको पनि अधिकार भित्र पर्छ । यसथै मान्छेले सीमित दायराभन्दा माथि उक्लेर हस्तक्षेप गर्छ भने त्यो दण्डनीय हुनुपर्छ । नीति बन्नुपर्छ । प्राणीको अस्तित्व रक्षा प्रकृति र मानिस दुवैका लागि आवश्यक छ । न्यायका कोणबाट मान्छेले कुनै पनि प्राणीलाई जथाभावी दुव्र्यवहार गर्ने र कष्ट दिने कुकार्य गर्न पाउनुहुँदैन । प्राणी निरीह छन् भन्दैमा उसले मनमोजी व्यवहार गरेर दुःख दिनुहुँदैन ।
दुई वर्षकी बालिकाले मास्क नलगाएको भन्दै आमाछोरीलाई नै विमानबाट झा’रियो , जब कि ति सानी बालिकाले दहि खादै थिईन ! (भिडियो सहित)